ज्वाइँ जेठान सम्बन्ध पर्ने ४६ वर्षका पदमबहादुर राईले किन यसो गरे ? – Nep Stok
ज्वाइँ जेठान सम्बन्ध पर्ने ४६ वर्षका पदमबहादुर राईले किन यसो गरे ?
मंग्सिर २७, २०७८ सोमबार 351
इलामको माई नगरपालिका–१ का शिक्षक पुष्पलाल राईको ह’त्या अभियोग लागेका सोही ठाउँका पदमबहादुर राईलाई जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ । ज्वाइँ जेठान सम्बन्ध पर्ने ४६ वर्षका पदमबहादुर राईले व्यक्तिगत रिसिबीका कारण जेठान ४६ वर्षीय पुष्पलालको ह’त्या ग’रे’का थिए ।
मा’द’क प’दा’र्थ से’व’न ग’रे’का सम्बन्धले ज्वाइँ पर्ने पदमबहादुरले जेठान पुष्पलालकै घरमा गएर पछाडिबाट घाँ’टीमा खु’कु’री प्र’हा’र ग’रेर ह’त्या ग’रे’र राति अर्कैको घरमा गएर बसेका थिए ।
२९ असोज २०७७ मा अम्लिसे भन्ज्याङ आधारभूत विद्यालय कार्यरत शिक्षक पुष्पलालको घरैमा शव भेटिएको थियो । भोलिपल्ट बिहान मृत भेट्टिएका पुष्पलालको ह’त्याको अनुसन्धान गर्न प्रहरीले धरानबाट ‘लैला’ नामको कुकुर झिकाएको थियो । अनुसन्धानको लागि तालिम प्राप्त कुकुरको सं’केतको आधारमा प्रहरीले पदमबहादुरलाई तत्काल पक्राउ गरेको थियो ।
अनुसन्धान पुरा भएपछि प्रहरीले सरकारी वकिलमार्फत जिल्ला अदालतमा अभियोजन दर्ता गरेको थियो । जिल्ला अदालतले अभियोगी राईलाई जन्मकैद सँगै पीडितका नाममा ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र पीडित राहत कोषमा दुई हजार आठ सय रुपैयाँ समेत जम्मा गर्ने गरी फैसला सुनाइएको जिल्ला अदालत इलामका श्रेस्तेदार फडिन्द्र भट्टराईले जानकारी दिए ।
तस्बिर : शव भेटिएका शिक्षक राईको घर
Prevपाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, मंसिर २७ गते सोमबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
Nextसिमपानी जादै गरेको जीप दुर्घटना, तीनको मृत्यु, १९ जना घाइते
छोरा जन्माउने आशमा गर्भवती महिलाको टाउकोमा ह्यामरले गाडियो किला !